#Somaliland: Xarunta Daryeelka Dadka Qaba Xannuunka Dhimirka Ee #SAHAN Oo Munaasibad U Qabatay Dad Markii Ay Bogsadeen La Baray Xirfado Ay Ku Shaqaystaan - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
#Somaliland: Xarunta Daryeelka Dadka Qaba Xannuunka Dhimirka Ee #SAHAN Oo Munaasibad U Qabatay Dad Markii Ay Bogsadeen La Baray Xirfado Ay Ku Shaqaystaan
Hargeysa(ANN)-Cusbitaalka SAHAN oo lagu daweeyo, isla markaana lagu daryeelo Dadka qaba Xanuunnada dhimirka, ayaa lagu qabtay Munaasibad loo sameeyay ku dhowaad afartan qof oo markii hore loo geeyay halkaa xannaanayn iyo daryeel, balse markii ay bogsadeen loo bilaabay xirfado ay ku shaqaystaan maadaama ay ku laabanaayan bulshada.
SAHAN, oo ku taal duleedka woqooyi galbeed ee magaaalada Hargeysa, waa xarun daryeel caafimaad oo caan ku noqotay taageerada iyo dayeelka dadka uu haleelo xannuunka dhimirka, waana ta ugu ballaadhan guud ahaan gobolka Geeska Afrika ee lagu daryeelo dadka qaba xanuunka dhimrka.
Munaasibada xarunta Cusbitaalka SAHAN oo lagu daweeyo, isla markaana lagu daryeelo Dadka qaba Xanuunnada dhimirka, Iamge file Araweelo News Network. August 2021.
Dadka qaba xanuunnada dhimirka, ayaa laga keenaa dalal badan oo Bariga Afrika iyo Caalamka intiisa kale ah, waxaana Dadka qaba Xanuunnada Dhimirka markay bogsadaan lagu baraa Xirfado ay ku shaqo tagaan, sida Dawaarka, samaynta Jaajuurka (Labanka), Laydhka, Barashada Afka Soomaaliga, Qur’aanka Kariimka ah iyo Xirfado kale oo muhiim ah, taas oo wax weyn ka tartarta daryeelka caafimaadka iyo shaqo-abuurka.
Munaasibad weyn oo loo qabtay dadka sannadkan la baray xirfadaha kala duwan ee ku caafimaaday xarunta ayaa lagu qabtay dhismaha xarunta, waxana ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda, ganacsato, madaxdhameed iyo culimo iyo waalidiinta dadka ay caruurtoodu ku jiraan xaruntaa.
Saraakiisha maamusha xarunta ayaa ka sheegay munaasibada in Sannad kasta Sahan Illaahay Caafimaad ka siiyo dad tiro badan oo bulshada dib ugu noqda iyagoo bad-qaba, isla markaana xirfado kala duwan oo ay ku shaqo-tagi karaan soo bartay.
Dufcaddii 12-aad ayay ahayd ee inta ay bogsadeen, la baray Xirfadaha kala duwan, waxaa hadalo ka jeediyay Agaasimeyaasha guud ee Wasaaraha Waxbarashada Axmed Abokor, Ciyaaraha Maxamed Siciid Khaawi, Guddoomiye ku-xigeenka Hay’adda Maamul-wanaagga, xubin ka socday Guddiga Qandaraasyada Qaranka JSL, Siyaasiyiin Dhakhaatiir, Waalidiin iyo Maamulka Xarunta.
waalidiinta iyo Qoysaska Dadka Xarunta ku jira oo munaasibadda ka hadlay, ayaa maamulka Sahan Hospital uga mahad-celiyey dedaalka ay geliyeen horumarinta adeegyada xaruntan lagu daryeello Dadka qaba xanuunka dhimirka, waxaanay ku baaqeen in xukuumadda iyo bulshaduba taageero ku garab-istaagaan Cusbitaalka Sahan.
“Xarunta Sahan waxay ku jirtaa sannadkii 10aad, waxa soo maray dad ka badan 50-kun qof oo kala kala keenay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba oo ay ku jiraan dad ka yimi dalalka deriska ee Ethiopia, Soomaaliya iyo Djibouti.
Muuqalka Xaflada loo qabtay dadka ka bogsaday xannuunka dhimirka halkan ka daawo.